Tanora · Marsa, 2009 · Global Voices teny Malagasy
Tanora · Marsa, 2009
Tantara mikasika ny Tanora tamin'ny Marsa, 2009
Ejipta: Navoaka ny fonja ny mpamaham-bolongana Mohamed Adel
Ejipta11 Marsa 2009
Novotsorana ny mpitoraka bolongana Ejipsiana antsoina hoe Mohammad Adel izay namahana ny blaogy antsoina hoe Maeit ary efa voafonja nanomboka tamin’ny 22 Novambra 2008. Mamehy izany rehetra izany ao anatin'ity lahatsoratra ity i Marwa Rahka.
Kyrgyzstan05 Marsa 2009
Tapitra ny vanim-potoanan’ny ririnina, ary miandry ny lohataona mafana I Kyrgyzstan: ny fivorivoriana, ny hetsika fitakiana sy ny sisa. Kanefa aleho kosa mba hiresaka ny hatsarana isika e, fa tsy hoe ny politika tsisy farany io foana. Mba nanao ahoana izay ny sarin-drininina tao Kyrgyzstana? Nendefa am-bolongana ny sary tokan’ilay...
Serbia:arovy amin'ireo mpandray zavamahadomelina ny ankizy
Serbia04 Marsa 2009
Ny vadin'i Jelena fahiny, lehilahy iray miankin-doha amin'ny zava-mahadomelina, dia tonga tao an-tranony ary nandrahona ny zanany. Nisaraka taminy i Jelena, roa taona lasa izay. Nomen'ny Fitsarana alàlana hahazo mitsidika ny zaza ingahirainy, satria noheverina hanampy ny fitsaboana azy hiala amin'ny fiankinan-doha amin'ny zavamahadomelina izany, nefa kosa tsy mbola nanome...